မြို့နယ် ၂၆ မြို့နယ်၌ GSM တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှုအား ယာယီ ဆိုင်းငံ့ သွားမည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း GSM ,
ZTE Network မြို့နယ် ၂၆ မြို့နယ်မှာ GSM တယ်လီဖုန်းများ ဆက်သွယ်မှုကို မိနစ်ပိုင်းခန့် ယာယီ ဆိုင်းငံ့ သွားမှာ
ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရပါတယ်။ ဒီလို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ သွားမယ့် မြို့နယ်များ ကတော့ အလုံ၊ လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ Read more »
အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မဲစတင်ပေးနေပြီ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာ သမ္မတသစ်ကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် စတင် မဲပေးနေကြပါပြီ။ တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားပြု သမ္မတ Barack Obama နဲ့ ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီ ကိုယ်စားပြု မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mitt Romney Read more »
11/06/2012 10:59:00 PM
ဗီဇာငွေထုတ်ကတ်များ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တရားဝင် သုံးစွဲနိုင်တော့မည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်အရပ်ရပ်အား Visanet ကို လည်ပတ်စေပြီး တစ်စက္ကန့်လျှင် ငွေချေမှုပေါင်း ၂၄၀၀၀ ကို တစ်ပြိုင်တည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သကဲ့သို့ အတုလုပ်မှုများမှလည်း သုံးစွဲသူများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး
ကုန်သည်များအတွက်လည်း အာမခံငွေချေမှုများကို Read more »
11/06/2012 10:48:00 PM
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ရာမူး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံ လိုက်ရသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို စစ်ဆေးမည်
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ အတိုက်အခံ ဘီအမ်းပီ ပါတီ ခေါင်းဆောင် ယခင် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ခါလစ်ဒါဇီယာသည် လာမည့် စနေနေ့တွင် ရာမူးသို့ သွားရောက်ပြီး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးလိုက်ရသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို သွားရောက် ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးမည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
11/06/2012 07:13:00 PM
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက တုတ်ဓါး လက်နက်များကို သိမ်းယူသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။လက်နက် များ သိမ်းယူနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များ တိုးတက်ရေးပါတီ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်နယ် လွတ်တော်ကိုယ်စား Read more »
11/06/2012 07:12:00 PM
မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ 
မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အား လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ် ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက် မှ ပြည် ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သို့ လွဲပြောင်းလိုက်ကြောင်း သိရ သည်။
ပန်းဘဲတန်းမြို.နယ်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ (၃၁)လမ်း အောက် လမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၇၅) ပထမထပ်နေ၊ ဦးဗစ်ကီး(ခ)ဦးဝင်းနိုင်ထွန်း၊ အသက်(၄၂)သည် ၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ၆ရက် နံနက်၁နာရီ ၃၀မိနစ် အချိန်ခန်.တွင် အိမ်ခန်း အတွင်းရှိ တံခါးပေါက် ဘောင်တန်းအား
11/06/2012 06:38:00 PM
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဂျာမနီနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Guido Westerwelle အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ၌
ရောက်ရှိနေသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဌာနဝန်ကြီး H.E. Mr. Guido Westerwelle အား နိုဝင်ဘာ (၅)ရက် ညနေ(၅)နာရီ (၁၅)မိနစ်တွင် ဗီယင်ကျန်းမြို့ရှိ National
11/06/2012 06:29:00 PM
၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ပယ်ဖျက်ပြီး အသစ်ရေးဆွဲမည့်အဆို မအောင်မြင်၊ မှတ်တမ်းအဖြစ်သာ ထားရှိ
ယနေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၆ရက်နေ့) တွင် ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်း အဝေးတွင်မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို အသစ်ရေးဆွဲ ပြဌာန်းပြီး လက်ရှိ မြန် မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ၁၉၈၂ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် (၄) အားကိုယ် စားလှယ် (၁၀)ဦးက ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း အဆိုအား လွှတ်တော်ဆွေးနွေး ခြင်း
11/06/2012 06:13:00 PM
မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းနှင့် နောက်လိုက် ၃ ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်
မူးယစ်ရာဇာ စိုင်းနော်ခမ်းနှင့် နောက်လိုက် ၃ ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်
ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့ တရားရုံးက ယနေ့ သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ အခြားသောနော်ခမ်း၏ အဖွဲ့ဝင်ထဲမှ ၁ ဦးကို ထောင်ဒဏ်
11/06/2012 04:57:00 PM
(၉) ကြိမ် မြောက် အာရှ - ဥရောပ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ (ASEM) ညီလာခံ
ဗီယင်ကျန်း မြို့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် (၉)ကြိမ် မြောက် အာရှ - ဥရောပ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ (ASEM) ညီလာခံတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် နော်ဝေ နိုင်ငံ တို့အား အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အဖြစ် ဝင်ခွင့် ပြု လိုက်ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
11/06/2012 04:46:00 PM
ရခိုင်ဒုက္ခသည်များကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက် ရခိုင်မိသားစုများက မြန်မာကျပ်ငွေ သန်း ( ၂၀ ) ခန့် လှူဒါန်း
မိမိမြို့ ရွာမှာနေ မိမိရပ်ကွက်မှာ စားမိမိတို့ မိသားစုနှင့် အေးအတူ ပူအမျှ
နေထိုင်ကြသော ရခိုင်လူမျိုး တို့ မှာတိုင်းတပါးမှ ခိုးဝင်လာသူဘင်္ဂလီကုလား များကြောင့် နေအိမ်များ မီးရို့ ခံရခြင်း ၊ သတ်ဖြတ်ခံ
ရခြင်း ၊ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့လယ်မဲ ယာမဲ့ ဖြစ်ရခြင်း
﻿ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာအတွင်းရှိ အဘယခေမိက ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်းတွင် အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အုန်းချောကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဘယခေမိက ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် နေ့က လူပေါင်း ၃၇
ဦး အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရှိရသည်။
ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် နှင့် ဦးသိန်းစိန် တွေ့မည်
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင် ရှင်နာဝပ်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် နေပြည်တော် တွင် တွေ့ဆုံ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သက်ဆင်သည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မြို့ တာချီလိတ်သို့ သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သော်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်နှင့် တွေ့ဆုံရန်
11/06/2012 03:48:00 PM
တောင်ကုတ်တက္ကသိုလ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွင့်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့၌ တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် တောင်ကုတ် တက္ကသိုလ်ကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ် သွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ နောက် ရက် ၃၀ အတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ။”” ဟု အဆိုပါ တက္ကသိုလ်တည် ဆောက်ရေးအား တာဝန်ယူထားသည့် နေလ Read more »
11/06/2012 03:29:00 PM
ယခုဆိုရင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ထဲမှာ ဘင်္ဂလီ ၁ ယောက် ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘင်္ဂလီ ၃ ယောက် စုစုပေါင်း ၄ ယောက် လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေပြီ
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော မဲဆန္ဒနယ်မှ-(၁) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း (ခ) ဇော်ကီးအာမတ်သည် ယခုအခါ နိုင်ငံသား
စီစစ်ရေးကဒ်ပြား အမှတ် ၁၂/ပဘတ(နိုင်)၀၂၉၉၅၁ ကိုင်ဆောင် ထားေ သာ် လည်း ၎င်း၏ မိဘများဖြစ်သော ဘင်္ဂလီလူမျိုး (ဘ)ဦးနူရ်အာလမ် Read more »
11/06/2012 03:25:00 PM
မြောက်ဦးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ နောက်ဆုံးအခြေအနေ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် ပဋိပက္ခနှင့်ပက် သက်၍
မြောက်ဦးမြို့နယ်မှ ရခိုင်(၁၂)ဦးအား စစ်တွေသို့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခတွင်း ပျောက်ဆုံးနေသူများအား ယခုအချိန်ထိ
11/06/2012 03:20:00 PM
“constitution က မပီပြင်လို့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးက မကျေနပ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရတာ” ဦးအောင်မင်းနှင့် တွေ့ဆုံပွဲမှ ဒီမိုပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ ရင်ဖွင့်သံများ)
အင်္ဂလန်၊ မြောက်အိုင်ယာလန်၊ အစရှိသည့်နိုင်ငံများသို့ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့မှ (၁၆)ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော် ဆောင်ရေးကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းက ဆိုသည်။
11/06/2012 02:46:00 PM
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတွင် ကရိုနိုဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေကြောင်း အတည်ပြုကြေညာ
ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတွင် ကရိုနိုဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့ပွားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာန တာဝန်ရှိသူများ အတည်ပြု ပြော ဆိုခဲ့သည်။ဆော်ဒီအစိုးရက လူတစ်ဦးသည် ကရိုနိုဗိုင်း ရပ်စ် ကူးစက်ခံရကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်နောက် ရီယာ့ဒ်မြို့တော် Read more »
11/06/2012 02:41:00 PM
အငှားယာဉ်မောင်းအား လည်ပင်းညှစ် ချွန်ထက်သောအရာဖြင့် ထောက်ကာ လုယက်သူ တစ်စုအား ၂၄ နာရီအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ ၅.၁၁.၂၀၁၂ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ယာဉ်မောင်း ရဲဇော် မောင်း နှင် သည့် ဒ/… … …… ……..
အမည်မသိ လူငယ် (၄)ဦးမှသုဝဏ္ဏတံတားအဆင်း “ DC” နိုက်ကလပ်သို့ ငှားသွားရာ နိုက်ကလပ် ရောက်ခါနီး တွင် ယာဉ်နောက်ခန်း wGif စီးနင်း Read more »
11/06/2012 02:30:00 PM
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ထိထိရောက်ရောက် မကိုင်တွယ် လျှင် တတိယ အကြိမ်မြောက် တကျော့ပြန် ဆူပူအကြမ်းဖက်မူများ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ပြန်လည် ဖြစ်ပွားလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ပန်းမြောင်း
ဒေသခံ တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
11/06/2012 02:16:00 PM
ရန်ကုန်မြို့၏ အမြင့်ဆုံအဆောက်အဦကို ဂျပန်နည်းပညာဖြင့်ဆောက်လုပ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ကုန်သည် လမ်း၊ အမှတ် (၅၅၅) ရှိ (၁၁၅x ၂၀၀) ပေကျယ်ဝန်းသောမြေကွက် တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ခေတ်မီဆောက် လုပ်ရေးနည်းပညာဖြင့် အထပ် (၃၆) ထပ်မြင့်မားသည့်ရန်ကုန်မြို့ တော်၏ အမြင်ဆုံးအဆောက် အအုံဆောက်လုပ်ရန် ကြိုတင်ပြင် ဆင်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
11/06/2012 02:13:00 PM
ချင်းတောင်ခြေမှ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ (၁၉)ဦး ဖမ်းမိ (မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ)
နိုဝင်ဘာ(၅)ရက်နေ့တွင် ကလေးမြို့နှင့် ကိုးမိုင်အကွာ၊ ဆင်ရွာနှင့် သာယာရွာ အကြား လယ်ကွက်များ အတွင်း ချင်းတောင်ခြေ ပျားစွဲတောင်ရှိ ကျူတောတွင် ပုန်းခိုနေကြသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၁၉)ဦးအား Read more »
11/06/2012 01:08:00 PM
ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ရုံးတင်စစ်ဆေး
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုန် ၄ မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ သားပိုင် မြူးနှင့်ဇူး အထည်ချုပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အလုပ်သမား ၆ ဦးကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ မရမ်း ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်က တရားရုံးတွေက စတင်စစ်ဆေးခဲ့ Read more »
11/06/2012 12:07:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တိုင်းရင်းသား များစုပေါင်း၍ ရခိုင်အရေးအတွက်ကြေ ညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်မည်
သည်ပြည် ထောင် စုအရေးဖြစ်သည့် အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစုပေါင်းကာ ရခိုင် အရေးအတွက်ကြေညာ ချက်တစ် စောင် ကိုနိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ပြန်သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း နိုဝင်ဘာ (၅)ရက်နေ့ တွင်ပြု လုပ်သည့် တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်များနှင့်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် တို့တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိ ရ သည်။
11/06/2012 12:05:00 PM
11/06/2012 12:04:00 PM
GSM နှင့် WCDMA မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်များ လေလံတင် ရောင်းချသွားမည်
GSM/WCDMA မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းများ တိုးချဲ့ရာမှ ပါရှိလာသည့် ဖုန်းနံပါတ်အလှနှင့် အပူးနံပါတ်များအား ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် အများပြည်သူသို့ လေလံတင် ရောင်းချပေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရှိရသည်။
11/06/2012 11:07:00 AM
ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါမှာ မကြာခင်ကမှ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မယ်နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲမှာ မယ်အင်တာနက်နဲ့ People choice ဆုကို ပူပူနွေးနွေး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာမယ် နန်းခင်ဇေယျာကို အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်လာလို့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေက အလွန်စိုးရိမ်နေကြ ပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာဟာ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူနေ့စဉ်လှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ပြသူ တဦးပါ။
11/06/2012 10:58:00 AM
အမှန်တရား ဘက်တွင် တပ်မတော် ရှိပါသည်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလကုန် ပိုင်းနှင့် ဇွန်လဆန်း ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ရာဇဝတ်မှု များ၏ လှိုင်းဂယက်ကြောင့် လူအုပ်စု
အချင်းချင်း ဒေါသ အလျောက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု၊ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ရပါသည်။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ အထိ သေဆုံးသူ ၅၀ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာ ရရှိသူ
၅၄ ဦး ရှိကြောင်း၊ လူနေအိမ် ၂၂၃၀ အိမ်နှင့် ဘာသာရေး အဆောက် အအုံ ၁၄ ခု မီးလောင် ဆုံးရှုံး ခဲ့ရ ကြောင်းနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူ ၆၁၄၆၂ ဦးမှာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ရကြောင်း တရားဝင် သတင်းများ က ဖော်ပြ ပါသည်။
11/06/2012 10:53:00 AM
ရခိုင်အရေး သည်ပြည် ထောင် စုအရေးဖြစ်သည့် အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစုပေါင်းကာ ရခိုင် အရေးအတွက်ကြေညာ
ချက်တစ် စောင် ကိုနိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေ့ တွင်ထုတ်ပြန်သွား မည် ဖြစ် ကြောင်း နိုဝင်ဘာ (၅)ရက်နေ့ တွင်ပြု လုပ်သည့် တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်များနှင့်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် တို့တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိ ရ သည်။
11/06/2012 10:46:00 AM
ဘင်္ဂလီများသည် လက်နက်များကိုအကုန်လုံးမအပ်နှံပဲ ကျန်ရှိလက်နက်များနှင့်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရှိရ
၂၀၁၁ နေ့ည ၆ နာရီအချိန်ခန့်တွင် စိုးဝင်း၊ ဘ-ဦးမောင်ဘချေ၊ ၂၈ နှစ်၊ မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းကျေးရွာအရှေ့ဘက်ရှိ ဂင်္ဂါဂျိုင်တွင် ကွမ်းခင်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံများလုပ်ကိုင်နေထိုင်စဉ် ညနေ၀င်ချိန် တဲပြင်သို့ ထွက်နေစဉ် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ဦးခန့်လာပြီး လေးဂွ၊ ဂျင်ကလိများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ဒူးအောက် ပိုင်းထိမှန်ကာ ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသည်။
11/06/2012 10:27:00 AM
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာရန် စီစဉ်နေသူ ကလေးနှစ်ဦး အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသား ၉ ဦးကို စက်လှေ တစ်စီးပေါ်မှ တနင်္လာနေ့ နံနက်က ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်ဟု ဘင်္ဂလာ နယ်ခြား စောင့် တပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။
11/06/2012 10:21:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့တွင် မွတ်ဆလင်များက ခံတပ် သဘောမျိုး တည်ဆောက် နေရာယူထားသော တောင်ပေါ်ကို ယနေ့ စစ်တပ်က တက်ရောက်ရှင်းလင်းပြီး မွတ်ဆလင် မိသားစုများကို တောင်အောက်တွင် တည်ဆောက်ထားသော ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ပို့ဆောင်သည်ဟု သိရသည်။
11/06/2012 10:20:00 AM
ကျောက်ဖြူတွင် ငါးဖမ်းလှေများ ပြန်လည်ငါးဖမ်းထွက်ခွာနိုင်ပြီ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပဋိပက္ခများကြောင့် ရပ်ဆိုင်းနေခဲ့ရသော ငါးဖမ်းလှေများ ပင်လယ်ပြင်သို့ ပြန်လည်၍ ငါးဖမ်းထွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် ပဋိပက္ခ အတွင်း ကျောက်ဖြူမြို့မှ
ဘင်္ဂလီများသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဘက်သို့ လှေများဖြင့် ထွက်ခွာသွားကြသည့်အတွက် ရေလုပ်ငန်း
အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှုနောက်ဆုံးနေ့ အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့ Republican သမ္မတလောင်း Mitt Romney ဒီကနေ့ ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတရွေးပွဲအတွက် အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama နဲ့ ရီပက်ပလင်ကမ် စိန်ခေါ်သူ Mitt Romney တို့ဟာ အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ရမယ့် ပြည်နယ်တွေမှာ ထောက်ခံမှု ပိုရအောင် အစွမ်းကုန်မဲဆွယ်နေကြပါပြီ။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် စိုးရိမ် သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard ဟာ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တနင်္လာနေ့က လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယန်ကျန်းမြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အာရှ-ဥရောပ ASEM ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတက်ဖို့ လာအိုနိုင်ငံမှာ ရောက်နေကြတဲ့ အချိန်အတွင်း
သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ သြစတြေးလျအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံအရေး လှုပ်ရှားသူတွေကတော့ သြစတြေးလျအစိုးရအနေနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေအပြင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း အလေးထားဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
11/06/2012 09:44:00 AM